Imiphumela yosesho ye- «a» - Geofumadas
Imiphumela yosesho ye- "a"
I-AulaGEO isiphakamiso esakhiwe eminyakeni edlule, sihlinzeka ngezifundo ezahlukahlukene ezihlobene nezihloko ezinjenge: Geography, Geomatics, Engineering, Construction, Architecture nezinye ezibhekiswe endaweni yobuciko bedijithali. Kulo nyaka, kuvulwa inkambo eyisisekelo ye-Structural Geology lapho ...
Okokuqala, umbuzo olula kakhulu. Kuyini ukuhlakanipha kwendawo? Indawo Intelligence (LI) itholakala ngokubona kanye nokuhlaziywa kwedatha ye-geospatial ukuthuthukisa ukuqonda, ulwazi, ukwenza izinqumo nokubikezela. Ngokwengeza izendlalelo zedatha, njengezibalo zabantu, ithrafikhi, nesimo sezulu, kumephu ehlakaniphile, izinhlangano ...
Ohlelweni lwesi-6 lweTwingeo Magazine, sikwazile ukunambitha lokho okuhlinzekwa yipulatifomu entsha yokuphathwa kwedatha yendawo i-Unfolded Studio enikezayo. Leplatifomu entsha, kusukela ngoFebhuwari 1, 2021, ebisenza abantu bakhulume ngamathuluzi angahle awanikezayo okuphatha nokuphatha okukhulu ...
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokwakhiwa kwesakhiwo, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Futhi kulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba ngokwengxenye baphatha kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukuhlela ukwakheka kokwakheka kwemijikelezo yayo ehlukene yokuklama, ukuhlaziywa nokuhlelwa kwe ...
Izinzwa Remote - Special of the 6th. Uhlelo lwe-TwinGeo
Uhlelo lwesithupha lweTwingeo Magazine selulapha, olunengqikithi emaphakathi ethi "Izinzwa Ezikude: isiyalo esifuna ukuzibeka esimweni sokumodela iqiniso lasemadolobheni nelasemakhaya". Ukudalula ukusetshenziswa kwemininingwane etholwe ngezinzwa ezikude, kanye nazo zonke izinhlelo, amathuluzi noma izindaba ezihlobene ngqo nokuthwebula, ...
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokuklanywa kwemishini, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Kanjalo nakulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukudidiyela ukwakheka kwe-parametric kumjikelezo wayo ohlukile wokumodela, ukuhlaziywa nokulingiswa kwe ...
Le mfundo ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokuhlela ukwakhiwa, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Ngokufanayo, kulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba ngokwengxenye baphatha kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukudidiyela ukwakhiwa nesabelomali kokuhlukile ...
Le mfundo ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wemisebenzi yomphakathi, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Ngokufanayo, kulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukudidiyela ukwakhiwa kwemisebenzi yomphakathi kumjikelezo wayo ohlukile wokutholwa, ukwakhiwa ...
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokuzwa okukude, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Ngokufanayo, kulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba ngokwengxenye baphatha kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukuxhumanisa imininingwane yendawo neminye imijikelezo yokutholwa, ukuhlaziywa nokulahlwa ...
Le mfundo ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni we-Geographic Information Systems, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Futhi kulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba ngokwengxenye baphatha kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukuhlanganisa imininingwane ye-geospatial ekutholakaleni kwayo okuhlukile, ekuhlaziyweni nase ...
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ... ikhasi 105 ikhasi elilandelayo